ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မှဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှအကြောင်းအရင်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Dr.Thinzar Hua Wynn
၂၂.၆.၂၀၁၈ | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
နို့​ချောင်း​တွေဟာ နို့​ပေါက်​နဲ့ နို့ထုတ်​တဲ့အခန်းတွေကို ဆက်​သွယ်​​ပေးထားပါတယ်​။
တစ်​ခါတစ်​ရံ နို့တိုက်​​နေရင်း နို့​ချောင်း​တွေ၊ နို့​ပေါက်​​တွေ ပိတ်​ဆို့သွားတတ်​ပါတယ်​။ ပိတ်​တဲ့အချိန်​​ပေါ်မူတည်​ပြီး ​ရောဂါလက္ခဏာ​တွေ၊ ကုသမှု​တွေ မတူ...
၁၉.၆.၂၀၁၈ | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
အချဉ်​ထုတ်​၊ ​ပေါင်​မုန့်​၊ ​ရေခဲမုန့်​၊…. စသဖြင့်​ များပြားလှတဲ့ ချဉ်​ခြင်း​တွေဖြစ်​​နေပါသလား? စိတ်​မပူပါနဲ့။ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အမျိုသမီး ၅၀က​နေ၉၀ရာခိုင်​နှုန်းဟာ အစားအ​သောက်​တစ်​မျိုးမျိုးကို ချဉ်​ခြင်းတက်​​နေ​လေ့ရှိပြီး တစ်​ချို့​တွေမှာ​တော့ ပုံမှန်​ကြိုက်​​လေ့ရှိတဲ့...